Ogaden News Agency (ONA) – Waa Barnaamijkii Abaabulka & Diyaarinta Bulshada Halgameysa Q4aad- By: Xaaji M/rashiid
Waa Barnaamijkii Abaabulka & Diyaarinta Bulshada Halgameysa Q4aad- By: Xaaji M/rashiid
Waxay cid waliba la socotaa hardanka ka aloosan dalka Ogadenya kaasoo udhaxeeya umadda somalida ogadenya ee caanka ku ah isdifaaca iyo guumaysi diidnimada iyo qabiilka tirada yar ee tigreega oo wata maleeshiiyaad uu ku soo hubeeyay dhaqaalihii Aduunku ugu deeqay.
Waxaa kale oo la ogyahay in Aduunka oo dhan ay kasocdaan dhaqdhaqaqyo ay wadaan umado ku raad jooga soo celinta karaamadoodii horay looga boobay kuwaasoo kukala sugan qaarado kala duwan. Waxaa iyaguna jira kuwo soo halgamay oo guul ka gaadhay halgankoodii oo maanta hoos hadhsanaya calankoodii birta ahaa oo babanaya.
Intii la socotay Barnaamijadii hore waxaan kusoo bandhigay umadaha xoroobay, balse maanta waxaad ila wadaageysaan mid kayara duwan oo ah inay jiraan kuwo raadinaya madaxbanaani sida shacabka soomaalida ogadenya oo kale.
Kuwii hore waxay ahaayeen qaaradda Afrika iyo yurubta bari, maantase waxaa Miiska inoo saaran yurubta Galbeed iyo hardanka siyaasadeed ee ka socda. Sidaad la socotaan waxaa jira Gobolo hoos yimaadda wadamada ingriiska iyo Spain oo lakala yidhaaho Scotland oo hoos timaadda Ingriiska iyo Catalonia oo hoos yimaadda Spain.
Waa wadamo laheystay in kabadan 200 ilaa 300 oo sano. inkasta oy taariikh fog ahayd hadana waxaa dhici karta in loo afmiishaareeyay ama awowyadood la laaluushay, sidaana ay ugu dhaceen dabinka ay maanta kujiraan.
Waxaynu isla eegaynaa guumaysiga ay kujiraani nooca uu yahay. Scotlan iyo Catalonia waa Dalal xaga nolosha ka dhamaystiran. Hadaan tusaale soo qaato waxaan leeyahay- Dadkooda habeenkii Guryaha lagalama baxo oo maxastooda sas iyo buuq laguma rido.
Majiraan guryo laga gubay ama beero laga quwaaxay, haday jiri lahaayeen Saxaafadaa laga maqli lahaa, taa badaleeda qoys waliba wuxuu daganyahay Qasri amaankiisuna wuu suganyahay. Ree Sotland iyo ree Catalonia Ma aha dad dhaansada Dameeraha ee waxaa u rakiban Tuubooyin. Musqulahooda hadaad gasho adaa is daawan oo waa Marmar iyo Muraayado.
Caruurtooda iyo Dumarkoodu waxay haystaan xanaano dhameystiran. Odayaashooda intay dharagtii ka badatay ayay Daacada hurgufayaan! Siyaasigooda lama xidho afkana lama qabto ee waxay la murmaan madaxda Dalalka guumaysta, meesha Siyaasiga ogadenya lagu cabsiiyo in Alambaqa lagu tuurayo haduu Qadiyadiisa ka hadlo.
Labada Gobol ee madaxbanaanida raadinaya ma haystaan Diinta Islaamka, sidaa awgeed waxay dhaqdaan Doofaarrada! waa su’aale wali miyaad maqasheen iyagoo leh Doofaarraa nalaga qashay? Meesha shacabka ogadenya Geelii, Lo’dii iyo Adhigiiba ay ka qasheen ciidamada gumaysiga itoobiya. Qodobka ay kukala duwanyihiin labada Gobol ayaa ah in shacabka scotland lakala xaday, balse kuwa catalonia lama kala xadin waxaadna ka garan aftidii laga qaaday 2014 ee dib raac.
Scotland iyo Catalonia waxay qaabilaan dadyowga qaxootiga ah oo ay caawiyaan. Taa caksigeeda ree Ogadenya wax ay qaabilaan iska daaye, iyagaaba laga barakiciyay Guryahoodii. Waxaa xusid mudan inay jirto kooxda kubadda cagta ee Barselona sida muuqatana loogu magacdaray caasimadooda, taasoo marag u ah inay haystaan horumar dhan walba ah, meesha caasimadda Ogadenya ee jigjiga ay ku caan baxday jeelka ciqaabta ee labaxay jeel-ogaadeen! Hadaan soo sheegay inay haystaan nolol wanaagsan bulshooyinkaas xornimo,doonka ahi maxay doonayaan oo ka maqan?
Halgamayaal hantida ugu qaalisan Bani,aadamka agtiisa waa xorriyadda sidaa darteed waxa kaliya ee ay tabanayaani waa go’aanka oon Gacmahooda kujirin iyo Calankooda oo saaxada caalamka ka maqan!. Hadaad aragtaan mid Aqoonyahan sheeganaya oo udhashay Ogadenya kuna hadaaqaya itoobiya waxbay inoo qabatay oo Ceel bay meel hebla ka qodday waa shaqsi aan Aduumba la soconin oo caqliyada ka foorara ee Duruustan haloo akhriyo.
Ururwaynaha ONLF oo majaraha u haya Halganka umadda soomaaliyeed ee ku dhaqan Mandiqada Ogadenya waa Urur ducaysan oo Cod dheer ku sheegay inuu difaacayo dheefta iyo dhaqaalaha dalkaas, isla markaana soo celinayo karaamadii dadka Gobolka. Taas waxay u jiidheen holac iyo Halis walina way sii wadaan. Cidii halgankaas ku dhimata kheyr bay helaysaa, cidii ku dhaawacantana khayr bay helaysaa. laba gooraba halgamaagu ma khasaarayo. Hadaan sidaa layeelin oon laqaadin jidka dagaalka ee ay dadku wada hayaan sow la gunoobi maayo.
Bishii febraayo ee lasoo dhaafay waxaa muqaal ahaan loo daawaday Qalanka quruxda badan ee Ogadenya oo laga taagay Dalka Canada magaalada Edmenton taasoo ay kasoo qeybgaleen xubno muhiim u ah Halganka. Waxaa loo qorsheeyay inuu muddo bil ah halkaas ka baban doono.
Waxaan usoo qaatay dhacdadaas inaan cadeeyo inuu halganka Ogadenya gaadhay meel ayna cidii xasaddaa waxba ka qaadaynin, sidaa darteed ruux kasta waxaa u furan in haduu wax dhaliilayo usoo gudbiyo qaabka ugu haboon, hadii kalana noqdo taageere lagu xisaabtamo.
Wixii intaa kasoo hadhay, Afkiisa iyo Adinkiisa edeb ha uyeelo. Xikmadihii hore ee soomaalida waxaa kamid ah- Xaqa dhabar lasaaraa, qunyar soo dhawaadee, Dhagar qabe ilaahay, uma dhiibo guushee!
OGADENYA GUUL DEG DEG AH INHA ALLAAH
Dhamaadka Barnaamijkii gaar ahaa.